တံတွေးစွပ်ခဲ့ပါ နိုင်းနိုင်းစနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တံတွေးစွပ်ခဲ့ပါ နိုင်းနိုင်းစနေ
Posted by Nan Shin on May 26, 2013 in Creative Writing | 36 comments
မြန်မာပြည်တွင် ဗုဒ်စဗုဒ်လယ် ဗုဒ်ဆုံးဟူသော ဗုဒ်သုံးဗုဒ်ကို အလွန်တရာမှတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးကြသည်။ထိုဗုဒ်
သုံးဗုဒ်တွင် ဗုဒ္ဓနှင့်အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသတို့ သည် နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ကြပြီး ဆရာတော်ဦးဗုဒ်သည်သာလျှင် မြန်မာပြည်ဇာတိဖွားဖြစ်သည်။တစ်နေ့ တွင် စာသင်ရဟန်းပျိုတပါးသည် ၄င်းဆရာတော်ဦးဗုဒ်ထံသို့ လာရောက်
ဦးခိုက်၍ သူပြုစုထားသော ကျမ်းစားအုပ်အား အမှားစစ်ပေးပါရန် အပ်နှံလေ၏။အမှားပါသည့် နေရာလေးများ
ကိုလဲ ထုံးတို့ ပေးထားရန် လျှောက်ထားပြီး ပြန်သွားသည်။ကျမ်းစာအုပ်အားစစ်ဆေး၍ပြီးလောက်မည့်အချိန်
တွင် ဆရာတော်ထံသို့ တစ်ခါပြန်သွားလေ၏။ထိုအခါ ဆရာတော်မှ ၄င်းရဟန်းငယ်၏စာအုပ်အား ထုံးအိုးထဲ
တွင် သွားယူချေဟု မိန့် လိုက်လေသည်။ထုံးမတို့ ပဲ ထုံးအိုးထဲတွင် စိမ်ထားပုံကိုကြည့်၍ အမှားမည်မျှရှိမည်ကို
အခါတပါးတွင်လည်း ၄င်းဆရာတော် ဦးဗုဒ်လား မည်သည့်ဆရာတော်လဲ ဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့။ ဆရာတော့်ကိုသာကြောင်းမာကြောင်းနှင့် မည်သို့ မည်ပုံနေထိုင်ရကြောင်းစသည်လျှောက်ထားသည့် စာ
တဆောင်ရောက်လာ၏။စာထဲတွင် အစစအဆင်ပြေပါလျှင် စာပြန်ရန်လည်း မှထား၏။ပရိယတ် ပဋိပတ် ကိစ္စ
များဖြင့် အလုပ်များလှ၍ စာပြန်ချိန်ကိုမပေးလိုသည်ကတကြောင်း စာမပြန်လျှင်မကောင်းသိကတစ်ကြောင်း
နောက်များမှာလည်း စာမလာစေချင်သည်ကို သိစေလိုတာကတစ်ကြောင်း စသည်စသည်အကြောင်းများကြောင့်
စာပြန်လိုက်သည်။ ၄င်းဆရာတော်၏ပြန်စာမှာ ပေစာတစ်ရွက်လုံးတွင် ‘’အိမ်း’’ ဟူသောတလုံးသာပါလေ၏။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လခန့် က ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ်၏ဟောပြောပွဲခွေမှလှတောသားတို့ အကြောင်းကိုနား
ထောင်လိုက်ရ၍ ရယ်မောခဲ့ရ၏။လှတောသားတို့ သည် ပျော်စရာရွှင်စရာများကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး ပြောဆိုပြီး
ရယ်မောနေကြ၍ ကျမ္မာရေး အလွန်ကောင်းကြကြောင်း၊ထို့ ကြောင့် ၄င်းတို့ ရွာတွင် ဆရာဝန်မလိုကြောင်း၊
အထက်လူကြီးများမှ စေလွှတ်လိုက်၍ ဆရာဝန်ရောက်လာသော်လည်း ရွာသားများမှာ ကျမ္မာရေးအလွန်
ကောင်းကြသဖြင့် ဆေးကုမည့်သူ သိပ်မရှိကြောင်း၊ထိုသို့ သောအခြေနေတွင် အနည်းငယ်ကျမ္မာရေးအနည်း
ငယ် ချို့ တဲ့သော သူများက ဆေးသွားကုရာတွင်လည်း သုံးယောက်ဆက်တိုက် သေးဆုံးခဲ့ကြောင်း၊တစ်
ယောက်မှ နှစ်ယောက်ထိ သေဆုံးချိန်တွင် ရွာသားများမှာ ခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်သော်လည်း သုံးယောက်
မြောက်သေးဆုံးသောအခါတွင် ၄င်းဆရာဝန်အား ဆက်လက်မထားရှိစေလိုတော့ကြောင်း၊ထို့ အတွက် ဆရာ
ဝန်အားတိုက်ရိုက်ပြောလျှင်လည်းမကောင်း ဆရာဝန်ကိုဖြတ်ပေးပါဟု တောင်းဆိုလျှင်လည်း မကောင်းသဖြင့်
အဘက်ဘက်မှ သင့်တော်လောက်သည့်စာတစ်ဆောင်အား အထက်သို့ ပို့ ပေးခဲ့ကြောင်း။၄င်းစာမှာ ‘’ဆရာဝန်အား တခြားဆရာဝန်နှင့် အစားထိုးပြောင်းလဲပေးလျှင်လဲ ပေးပါ၊မပေးနိုင်လျှင်လည်း ရွာသဂြိုင်းကုန်း
အား ချဲ့ ပေးပါရန်’’ ဖြစ်ကြောင်း စသည်စသည်။
အခုလည်းကျွှန်ုပ်တွင် ထိုထိုသို့ သောစကားများကို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြောရန်အကြောင်းကဖန်လာခဲ့ချေပြီ
ရေးမိခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။အပြိုင်ဆိုင်လည်းမရှိ။စာပေနဲ့ ပက်သက်၍မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟုပင် မည်မည်ရရ
မရှိ။ဒီစာတစ်ခုကို ဖတ်လိုက်လို့ စိတ်ချမ်းမည်ထင်လျှင် ဖတ်လိုက်သည်။ရေးလိုက်လို့ စိတ်ချမ်းသာမည်ထင်
လျှင် ရေးလိုက်သည်။ဆိုလိုသည်က ကျနော်သည်စာအတွက်မဟုတ်။စာသည်သာလျှင် ကျနော့်ဘဝ ဆယ်ရာ
ခိုင်နှုန်းလောက်ရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းတွင်လူအများစာဖတ်ကြသည်။ထိုလူအများထဲတွင်
ကျွှန်ုပ်လည်း အပါအဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။အခြားသူများဖတ်မိတာကိုလည်း ကျွှန်ုပ်ဖတ်မိနိုင်သလို ကျွှန်ုပ်ဖတ်ပြီး
သားကိုလဲ သူတို့ ဖတ်မိနိုင်သည်။သို့ သော် မည်သည့်စာကို မည်သူဖတ်ထားပြီးသလဲဆိုတာကိုတော့ မည်သူမျှ
သိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ကျွှန်ုပ်အနေနှင့် အင်္ဂလိပ်စာပေကို လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ကမှစတင်သင်ကြားခဲ့သည်။
ဘာသာပြန်စာပေနဲ့ နည်းဆက်ခဲ့တာ မကြာသေး။ဘလော့ဂ်ဆိုတာကို မနေ့ တစ်နေ့ ကမှ စသိတဲ့သူ။ သို့ သော်
မတောက်တခေါက်နှင့် သိသလောက်ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်စာပေဘလော့လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ချင်သည်။
အလွယ်ဆုံးမှစတင်သင့်သည်ဟုနားလည်ထား၍ အလွယ်တကာ့အလွယ်ဆုံးများကို ရှာဖွေ၍ပြန်ကြည့်သည်။
ပြန်ပြီးသားလေးမျာကို မိတ်ဆွေများထံ ပြန်ရှယ်သည်။ထိုသောအခါတွင်ကား နိုင်းနိုင်းစနေ ပြန်ပြီးသားများဖြစ်
၍နေလေ၏။ အပြုသဘောပြောသည်မျာကို နှစ်လိုအားရမှုရှိခဲ့သော်လည်း သူများပြန်ပြီးသားကိုဘာလို့ ပြန်ရ
လဲ မတူအောင်ရှောင်ပြီးတော့ ပြန်ပါလား စသည်စသည် ပြောလာသောအခါများတွင်ကား အတန်ငယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလိုလို ရှိ၏။
အမနိုင်းနိုင်းစနေလည်း အွန်လိုင်းမှ သူဖတ်မိတာကို သူပြန်သည်။ကျွှန်ုပ်လည်း ကျွှန်ုပ်ဖတ်မိသည်ကို ပြန်သည်။ သို့ သော်နောက်နောင် အဲ့သလိုအပြောမခံရရန်အတွက်မနိုင်းနိုင်းထံသာ လှမ်း၍တိုင်တည်ရန်ရှိတော့သည်။
ဖတ်ပြီးသား ဘာသာပြန်ပြီးသား အွန်လိုင်းစာမျက်နှာလေးများကိုတော့ဖြင့် မနိုင်းနိုင်းရေ တံတွေးသာစွပ်ခဲ့ပေး
ကျနော်ရေးတာတော့ ရယ်ရအောင်ရေးတာပဲဗျာ….မရယ်ရရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ ဂလိထိုးပြီးရယ်
ပေးကြဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်…..ဟီး ဟီး
NineNine SaNay says:
လူတစ်ယောက်က ကျွန်မကို FB မှာ မက်ဆေ့ပို့ပြီး အသိပေးလို့ ဒီလိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုပဲ ရီဂျစ်စတာလုပ်ပြီး
အလို.. 99sanay က အဲဒီလို ပြောသတဲ့လား…. ကျွတ်..ကျွတ်…ကျွတ်….
သူများဘာသာ ပြန်ပြီးသားဆို မပြန်ရတော့ဘူးတဲ့လား…
ဆိုတာကို ပြန်ဖြေရှင်းပါတယ်။ နန်းရှင်ဆိုတာကို ကျွန်မ မသိဘူး။ လူများဘာသာပြန်ပြီးသားကို လိုက်ပြန်တယ်လို့လည်း ကျွန်မ မပြောဖူးဘူး။ ကျွန်မလည်း စာရေးဆရာကြီးတွေ ဘာသာပြန်ပြီးသားကို ထပ်ပြန်မိတဲ့စာတွေရှိတယ်။ ဘယ်သူ ပြန်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ် မပြန်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ် စာတစ်ပုဒ်ကို လူ၁ဝယောက်ဘာသာပြန်ရင်တောင် အာဘော်ချင်း စကားလုံးရွေးချယ်ပုံချင်းမတူပါဘူး။ ဘယ်သူကိုမှ ငါပြန်ပြီးသား လိုက်မပြန်နဲ့လို့ မပြောဖူးဘူး။ ကြည့်ရတာ တစ်ခုခုတော့ နားလည်မှုလွဲနေပြီထင်တယ်။ အဓိက ပြောချင်တာက ဘာသာပြန်ပြီးတခြားလူကို ဝေမျှချင်ရင်၊ စာရေးတာ တကယ်ဝါသနာပါရင် တခြားလူ ဘာပြောပြော ကိုယ့်ဝါသနာ ကိုယ့်ဝေမျှချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို မပျက်ပါနဲ့လို့။ နိုင်းနိုင်းစနေမှာ ဒီလို သူတစ်ပါးကို ပြောဖို့ အားချိန်သိပ်မရှိဘူးကွယ်…
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဆက်သာလုပ်ပါ နန်းရှင် .. အားပေးပါတယ်
ဘလော့ လိတ်စာလေး….
ဂျက် ကွမ်းခြံကုန်း က တော့
မြန်မာ အင်းဂလိပ် ဒစ်ရှင်နရီ ထုတ် တာ
အရင် စာအုပ် မှာ တုန်း က ရှိသည် ဆို ရင် ၊ သူ က ရှိ၏ လုပ် ပစ် လိုက် တယ် ဆိုလားပဲ
သရော်စာ ရေးထားပုံ ပြောပါတယ်
ဒါနဲ့ ငါ့အကိုရေ လှ့တောရွာ ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှိ့သလဲဗျ..အကိုပြောသလို လှ့တောရွာက လူတွေက ရီရသလားဗျ..သူများရေးထားတဲ့စာပေတွေဖတ်ပြောတာလား ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလား ကိုယ်တိုင်ရောက်ဖူးတာလားဗျ…သိ့ချင်လို့ပါ
ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြထားတာပါ။
မြန်မာပြည်တွင် ဗုဒ်စဗုဒ်လယ် ဗုဒ်ဆုံးဟူသော ဗုဒ်သုံးဗုဒ်ကို အလွန်တရာမှတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးကြသည်။
အင်း .. တိုက်ဆိုင်လို့ …
ကျွန်မတို့ တရုတ်စာသင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ် … တရုတ်စာကျွမ်းကျင်ပြီး စာရေးတာလဲ ၀ါသနာပါလို့ တရုတ်ဆောင်းပါးတွေဖတ်ပြီး ဘာသာပြန်တယ် .. အဲဒါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ နိုင်းနိုင်းစနေ ပြန်ပြီးသားချည်းပဲ ဖြစ်နေခဲ့တယ် .. ၃ .. ၄. .. ၅ ခါ လောက်တိုက်ဆိုင်ပြီးခဲ့အခါမှာတော့ သူလဲစိတ်လျော့သွားတယ် …
ကျွန်မကသူပြောတာနဲ့တင် ကြိုပြီး စိတ်လျော့ထားလိုက်တာ .. တစ်ပုဒ်မှကို မပြန်ဖြစ်တော့ဘူး ..
ဝေဝေသူငယ်ချင်းကိုလည်း ပြောလိုက်ပါ.. တရုတ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့လူ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိသလို တရုတ်စာကျွမ်းပြီး စာရေးဝါသနာပါတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါလို့။ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းရှိတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရစေချင်တယ်။ စာတစ်ပုဒ်ကို ဘယ်သူဘာသာပြန်ပြန် လူ၁ဝယောက်ဘာသာပြန်ရင်တောင် ၁ဝယောက်လုံးရဲ့စာဟာ မတူနိုင်ပါဘူး။ စကားလုံးရွေးချယ်ပုံမတူဘူး၊ အာဘော်မတူဘူး။ စာရေးတာ တကယ်ဝါသနာပါရင်၊ တကယ့်စေတနာထားပြီး ဘာသာပြန်မယ်လို့ရည်ရွယ်ရင် ဘယ်သူပြန်ထားပြီးသားစာပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်ပြန်တော့ကော ဘာအရေးလဲလို့။ သူ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်နဲ့သူ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် စာကောင်းတွေကို ဘာသာပြန်တဲ့ ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတိုင်း အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မဘာသာပြန်ပြီးသား ဘာသာမပြန်နဲ့လို့လည်း မပြောဖူးဘူး။ ကြိုက်တဲ့စာ ဘာသာပြန်ပါ.. အားပေးနေပါတယ်။ လူများဘာသာပြန်ပြီးသားကို တိုက်ရိုက် ကော်ပီမကူးမိဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ .. ကျွန်မသူငယ်ချင်းလဲ ဒီဆိုဒ်ကိုဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက်မို့လို့ မနိုင်းနိုင်းရဲ့ ကွန်မန့်ကို တွေ့သွားမှာပါ …
အခုလို တကူးတက လာပြီး ကွန်မန့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
“ထိုအခါ ဆရာတော်မှ ၄င်းရဟန်းငယ်၏စာအုပ်အား ထုံးအိုးထဲ
တွင် သွားယူချေဟု မိန့် လိုက်လေသည်”
ရီရပါရုံမက ဆရာတော်ဦးဗုဒ်ရဲ့ ဥဏ်သွားပုံကိုလည်းမှတ်သားရပါတယ်….
ကျုပ်တစ်ခါက “စက်ရုံဘက်စုံတိုးတက်ရေး” ဆိုပြီး တင်ဖူးတယ်
ပြန်ကျလာတော့ လူကြီးမှတ်ချက်က တိုတိုပဲ…
“Very Funny” တဲ့ :harr:
အရီးတို့ လို တစ်ခြား ဆိုက်တွေ အစုံ မသွားနိုင်ဘဲ
ရွာထဲ မှာဘဲ လှည့်နေတတ်သူ တွေလဲ အများကြီးမို့ ရွာထဲ ကတော့ နန်းရှင် ရဲ့ ဘာသာပြန် စာတွေကို ကို ဝမ်းသာအားရဖတ်ပြီး အားပေးမှာပါ။
ဘာသာပြန် မှာတော့ တစ်ယောက်ပြန်ပြီးသား နောက်တစ်ယောက် ပြန်တာတွေလဲ ရှေးကထဲ က ဗားရှင်း အမျိုးမျိုး နဲ့ ရှိပါတယ်။
မူရင်းဘယ်က ဆိုတာ ပြောနိုင်သ၍ ပြသနာ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တာပါဘဲ။
ပလော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ ခေါ်မလား ဘာသာပြန်စာပေရေးသားပြီး တော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ဆရာတွေကို ………..။ သူတို့တောင် ဘာမှပြောသံမကြားဖူးဘူး…။
ဆရာတင်ထွေးက ဘ၀ကြမ်းကြမ်း ဆိုပြီးဘာသာပြန်တယ်….။ နောက်ဆရာ ဘုန်းမြင့် မန္တလေးက ဗန့်ဆင့်ဗင်ဂိုးဆိုပြီး ဘာသာပြန်ပြီး နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ အမျိုးသားစာပေ ဘာသာပြန်ဆုယူသွားတယ်….။ ရှေ့က ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့သူက ဘာမှပြောသံမကြားပါလား ….။ နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု ဆရာတွေနော်…………။ အဲဒိလောက်ပဲပြောလို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်…။
ကိုယ့်ဆရာနေဝန်းရဲ့ အတွေ့ အကြုံဟာ ကျနော့်အတွက် အားဆေးပဲဗျာ ….အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိတယ်။
ကျနော်ရေးလိုက်တဲ့စာက မနိုင်းနိုင်းပြောပါတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးတာတော့ အဲ့ဒိလိုသဘောမှ မဟုတ်တာ။ မနိုင်းနိုင်းစနေက တော်လွန်းအားကြီးလို့ကိုယ့်ဆရာသမားနေရာမှာ ထားပြီး တိုင်တည်တယ်လို့ တောင် သုံးထားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမနာမည်ကို ယူသုံးမိတဲ့ အတွက် ကျနော့်အလွန် ပါ။ဒီပို့ စ်ကို ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ် ။မဖျက်တတ်တော့လို့ ပါ။
အမှန်တော့ ပို့စ်ကိုသေသေချာချာဖတ်ရင်.. အဓိပ္ပါယ်ရှင်းပါတယ်..
နိုင်းနိုင်းစနေအပေါ်..Respect အပြည့်ရှိပုံ..ထားပုံလည်း.. မြင်ရပါတယ်..
ကော်မန့်တွေနဲ့.. အဓိပ္ပါယ်ပေါက်… ဘာတွေဖြစ်သွားလည်းတော့မသိပေမယ့်..နိုင်းနိုင်းစနေကိုယ်တိုင်ရွာထဲရောက်လာသမို့.. ရွာတော့အမြတ်ထွက်တယ်ထင်မိတယ်.. :harr:
အွန်လိုင်းစာမျက်နှာလေးများကိုတော့ဖြင့် မနိုင်းနိုင်းရေ တံတွေးသာစွပ်ခဲ့ပေးပါတော့လို့ ………………….
ဆိုတဲ့.. စာကြောင်းလေးမှာ..အနုပညာအပြည့်ပါတယ်လည်း.. ထင်မိတယ်…
နိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ သဘောထားကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
နှစ်ယောက်စလုံးကို အားပေးပါတယ်။ :hee:
ဒါပေမယ့် တံတွေး စွတ် ခဲ့ပါ ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ သိပ်နားမရှင်းဘူး။
တံတွေစွတ်ခဲ့ပါဆိုတာက web page စာမျက်နှာကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တံတွေးစွတ်လို့ ရမှာလဲ ဗျာ။ သူဟာကို ဖတ်ထားပြီးပြီလဲဆိုတာ မသိနိုင်တာကို တင်စားပြီးပြောတာပါ။web page ကိုတံတွေးစွတ်ရင် ကွန်ပျူတာပဲပျက်မှာပေါ့။သက်သက်မဖြစ်နိုင်တာကို ရွေးပြီးပြောတာပါ။
တံတွေးစွပ် မဟုတ်ပါ တံထွေးဆွတ် ဟု သုံးရပါမယ်..။
“ဘာသာပြန်စာပေနဲ့ နည်းဆက်ခဲ့တာ မကြာသေး။”
ဘာသာပြန်စာပေနဲ့ နီးစပ်ခဲ့တာ မကြာသေး..ဖြစ်ရမှာပါ ။
စာရေးတာ ကောင်းပေမဲ့ စာကောင်းရေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်..။
ကြိုးစားပါ ..အားပေးပါတယ် ။
စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာ ဆေးရိုးသည် ကန့်လန့်လုပ်လိုက်အုံးမယ်။ :harr:
တံတွေးဆွတ် အစား တံတွေးစွတ် လို့ထင်ပါတယ်။
ပို့စ်မှာ ရေးတဲ့ စွပ် ဆိုတာကို ခေါင်းစွပ်၊ စွပ်စွဲ ဆိုတာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
ဆွတ် ကို ဆွတ်ပျံ့ မှာသုံးပြီး
စွတ် ကိုတော့ စိုစွတ်တဲ့နေရာမှာ သုံးသလားလို့။
” စွပ် ဆိုတာကို ခေါင်းစွပ်၊ စွပ်စွဲ ဆိုတာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
စွတ် ကိုတော့ စိုစွတ်တဲ့နေရာမှာ သုံးသလားလို့ ”
ဟီ ဟိ ၊ ကို နွေဦးတော့ ထိပြီ ။
ဟောဒီရွာထဲ ဆြာမစက်တဒေး လာရေးရင် ဆြာမစက်တဒေး ကို အားပေးမယ်
ဆြာ နန်းရှင်လာရေးရင်ဆြာ နန်းရှင်ကို အားပေးမယ်…။
တယောက်ရေးပြီးသား နောက်တယောက် ထပ်ရေးလည်း ရင်ဘတ်ဂျက်ပင် ပိုထိုးနိုင်သူရဲ့
စာကို ပို အားပေးမယ်။
အပေါ်က စကူဒလိုင်ဘာ..ပေါတာဂိုထောက်ခံပါတယ်.. :harr:
ဒီနေရာမှာ တဆက်တည်း ဆရာမ နိုင်းနိုင်းစနေ ကိုပြောချင်တာက
ဒီရွာကြီးထဲ ရေစစ္စရီ လုပ်ပြီးမှတော့ စာလေးတွေပါ ၀င်ရေးပါလို့
အနော်ကတော့ ဘာသာပြန်ရေးမဲ့လူ အရေအတွက်တိုးလာတာနဲ့ကို
ကျွန်တော်လည်း မနိုင်းနိုင်းစ နေ ရဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပါတယ်။
အတွေး အခေါ်တွေကို ရဲရဲရင့်ရင့် ချ ပြ နေ တတ်တဲ့
ခပ် ထက်ထက် မိန်းမသားတစ်ယောက် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ်။
ရွာ ထဲက ရွာ သူ တစ်ယောက်မွေး နေ့ တုန်းက တောင်
နိုင်းနိုင်းစနေ ရဲ့ စာအုပ် က လေး ကို လက် ဆောင် ပေးခဲ့ပါရဲ့ ။
နိုင်းနိုင်းစ နေ ရဲ့ ကျွန်မ ဖတ် ဖို့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း
အ တော် ကောင်းလို့မိန်းက လေး သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင် ပေးမိတယ်။
ဒီရွာထဲမှာလည်းး စာတွေ ရေးပါ လို့ဖိတ်ခေါ်ပါ ရ စေ ဗျ ။
ခင် မင် စွာ
မောင်ကြက်၊ ကကြီးမိုက် ရွှေအိ နဲ့ အလင်း ဆက် တို့ နောက် ကို ဆက်လိုက်ပါတယ်။
နန်းရှင် ရော၊ နိုင်းနိုင်း ရော ရွာထဲ ဝင်လက်စ ဖြစ်နေမှတော့ ပြန်မထွက်သွားကြပါနဲ့။
ရွာသူ/သား တွေ အဖြစ် ဆက်နေလိုက်ကြပြီး ဘာသာပြန်စာလေးတွေ ကို တင်ပေးကြပါ။
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် ဆိုက် က စာတွေ လဲ ဒီမှာ တင် ရင်ဖြင့်
ကျုပ်တို့လို ရွာမကူးနိုင်တဲ့ တုံချိချိ အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီး တွေ စာကောင်း လေးတွေ ပိုပြီးဖတ်နိုင်ပါ။
ဒီလို ဖြစ်လိုက်တာ ကဘဲ ရွာထဲမှာ ဘာသာပြန်စာကောင်းလေးတွေ ပိုဖတ်ဖို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ တွေးပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်ယူပြီး လာဖြေရှင်း ပေးတာလဲ အင်မတန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွာသူ ထက်ထက်မြက်မြက် နောက်တစ်ယောက်တိုးပြီ မို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
နိုင်းနိုင်း လို အမျိုးသမီး သာ ရွာသူ ဖြစ်လို့ ကတော့ ရွာသူတွေ ပိုပြီး ဂုဏ်တက်ပါတယ်။
တင်ပြီး စာလေးတွေ လဲ လာပြီးသာ တင်ပေးပါလို့ ဆန္ဒပြုချင်ပါရဲ့။
မှတ်ချက်တွေ ပြန်နေစရာ မလိုပါဘူး။ စာတွေဖတ်ရရင်ကို အတော်တန်ဖိုးရှိလှပါပြီ။
အလုပ်များနိုင်တာ သိပေမဲ့ အချိန်လေး နဲနဲ လောက် မျှပြီး ရွာသူလုပ်ပါနော်။
ပြန်မထွက် သွားနဲ့ နော်။ :-)
နန်းရှင် လဲ နိုင်းနိုင်း နဲ့ ဘာသာပြန်မောင်နှမ မို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက် ရွာ ကို အားဖြည့် ပေးပါ လို့။
နန်းရှင် ပြန်ပြီး ပျောက်မသွားဘဲ ရွာထဲမှာ စာလေးတွေ ဆက်ရေးပါ လို့။
နောက်တစ်ခု ရွာထဲမှာ လိုသွားတာက ဒီလို နာမည်တပ်ပြီး ရေးလာတဲ့ အကြောင်း – ရေးသူရဲ့ အာဘော်ကို အသေအချာ မစီစစ်ခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တစ်လွဲကောက်မိတာများ ရှိခဲ့ရင်
ရွာရဲ့ ကိုယ်စား နိုင်းနိုင်းစနေ ကို တောင်းပန်ပါတယ်။
ရွာထဲက အချင်းချင်း မှတ်ချက်ပေး ပြောနေမိတာဟာ သူများကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း မစဉ်းစားမိခဲ့တာမို့ပါ။
နောင်ဆို သတိထားရမဲ့ အချက်တစ်ခု လို့ မှတ်ထားပါတယ်။
ဘာသာပြန်ရေးပါဗျိုး…. အပြင်စာ သိပ်မဖတ်နိုင်တော့ ရွာထဲက စာတွေကို ဖတ်ပြီးပဲ အတုယူရမှာပါပဲ….
ဆရာမနိုင်းနိုင်းစနေ ကိုယ်တိုင် ကလောင်နာမည် အရင်းနဲ့
ကျွန်တော် လည်း ဆရာမရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်ပါကြောင်း…။
ဒီပြဿနာကတော့ ကိုယ်ကစမိတာလို့ ၀န်ခံပါတယ်။
ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာများ- Nan Shin
Posted by Nan Shin on Feb 17, 2013 in Copy/Paste |4comments
အကြောင်းအရာရော ဘာသာပြန်လေးရော ကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် ကြိုးကြိုးစားစားပြန်ရတာဆိုတော့ သူတပါးမပြန်ဖူးသေးတာလေး
ရှာပြီးပြန်ရင် ပိုအကျိုးရှိမလားလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
နိုင်နိုင်း စနေ ဘာသာ ပြန်ထားတဲ့ အပုဒ် ကို ပဲ . . ဘာသာပြန် မိတယ် နဲ့ တူရဲ့ . .
ဟိုက်…..ကျနော်ဘာသာပြန်လိုက်တိုင်း ဒီမနိုင်းနိုင်းနဲ့ ချည်းသွားတူနေပါလား…တော်ပြီ…အဲ့ဒီဆိုဒ်က ဟာတွေ ဆက်မပြန်တော့ဘူး……ဝိုင်းထောက်ပြကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျမအယူအဆက ဘယ်စာရေးသူမဆို စုတုပြု လုပ်ရပါတယ်။စု၊တု အဆင့်မှာ စာများများဖတ်ထားရင် ပြုအဆင့်မှာ စာကောင်းထွက်ပါတယ်။ နန်းရှင်က သူများလို ကော်ပီ ပေ့စ် မဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်သည် ဆိုတော့ ဖန်တစ်ရာထပ်နေတဲ့ စာကို တွေ့ရတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ပြုထားတယ်လို့ မမြင်ကြပဲ သူများဆီက တုထားတယ်လို့ မြင်ကြရင် ပင်ပန်းရကျိုး မနပ်မှာ စိုးလို့ လျှာရှည်မိတာပါ။
နန်းရှင်ပို့စ်ရယ်၊အောက်က ကွန်မန့်တွေရယ် ဖတ်ရတော့ ဘာသာပြန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ နန်းရှင်ကို အားလျော့အောင် လုပ်မိနေသလားလို့ အပြစ်မကင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ဒီအတွက် နန်းရှင်ကိုရော၊ နိုင်းနိုင်းကိုရော ဒီနေရာကနေ တောင်းပန်ပါတယ်။
အပေါ်က ရွာသူားတွေ ဖိတ်သလိုပဲ နန်းရှင်ရော နိုင်းနိုင်းရော ရွာမှာ အိမ် တစ်လုံးစီဆောက်မိမှတော့ အခြေချဖို့ ဖိတ်ချင်ပါတယ်။
နိုင်းနိုင်းရဲ့ ပရိသတ်တော့ ဖြစ်ပြီးသား၊
နန်းရှင်ရဲ့ ပရိသတ်လည်း ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
အမပဒုမ္မာပြောသလောက်ဆိုရင် အားရကျေနပ်တဲ့ အထဲမှာ ပါတာပေါ့ ။ကျနော်က ဒီဆိုက်တစ်ခုထဲမှာ တင်တာ မဟုတ်ဘူးလေ ။ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ပါလုပ် ထားသေးတယ်။(အခုတော့ ဖျက်လိုက်ပါပြီ)။ဒီပို့ စ်ကိုတော့ အခြားနေရာတွေမှာ တင်ပြီး ခဏနေတော့ ပြန်ဖျက်လိုက်တယ်။ ဒီမှာတောင် မဖျက်တတ်လို့ ။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒါက ပြသ်သနာ တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်။ မပဒုမ္မ စတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်ပါ။ ကျနော်အခုမှသတိထား ပြန်ဖတ်မိတာ။ဒီက စာဖတ်သူတစ်ယောက် အဓိပ္ပါယ်ကောက်မှားပြီး မှတ်ချက်ရေးလိုက်လို့ ပါ။
ဆိုတဲ့ အဲ့ဒိကွန်မန့် ကြောင့်လို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။
ဆြာမနိုင်းနိုင်း တရုတ်လို ပျံတာ သိပ်တော်တယ်ဆိုရင် ကျုပ်နဲ့ တရုတ်လို ဂေါင်းခြင်းပြိုင်တိုက် ရအောင်.. ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် မဆောင်းဂျေး..